फेरि कतारबाट अायो यस्तो दुःखद खबर, के गर्लान अब? पुरै समाचार पढेर सेयर गराैं – PathivaraOnline
Home > प्रवास > फेरि कतारबाट अायो यस्तो दुःखद खबर, के गर्लान अब? पुरै समाचार पढेर सेयर गराैं
admin October 4, 2018 प्रवास 0
काठमाडौं, असोज १८ । कतारस्थित हम्टान अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक कामदारलाई तलब नदिई भागेका छन् ।सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि १ सय ४९ नेपालीसहित ९ सय विदेशी कामदार अलपत्र परेका छन् । कम्पनी डुबेपछि भारतीय नागरिक रलिइफ केएम कतारबाट भागेका हुन् । उनी कम्पनीका मुख्य सञ्चालक हुन् । कम्पनीका अध्यक्ष कतारी नागरिक युसुफ मलालाका अल हरामी कामदारको सम्पर्कमा छैनन् ।
कतारको श्रम कानुनअनुसार कम्पनी टाट पल्टे कामदारको बक्यौता भुक्तानी गरी स्वदेश फर्काउनुपर्छ । सञ्चालक फरार भएकाले कामदारले खानासमेत पाएका थिएनन् । भारतीय दूतावास, कतार च्यारिटी संस्था, लुलु हाइपरमार्केट, गोरखा सेवा समाज, लमजुङ सेवा समाजलगायतले उनीहरूलाई खानाको प्रबन्ध मिलाएका छन्। ‘९ सय जनाका लागि एउटै मेस छ ।
फेरि टोकियोमा बस्दै आएका एक नेपालीमा देखियो कोरोना संक्रमण